I-infographics: Ukwenza Amakhodi we-QR Athambekele | Martech Zone
I-infographics: Ukwenza amakhodi we-QR atholakale kalula
NgoMsombuluko, Agasti 8, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Abangani bami bayazi ukuthi angiyena umlandeli wamakhodi we-QR (Ukuphendula Ngokushesha). Ngesikhathi ngibona ikhodi ye-QR, nginquma ukuthi ngifuna ukuyiskena yini, ngivule iselula yami, ngivule uhlelo lokusebenza ukuskena ikhodi… bese ngiyiskena empeleni - bengingathayipha ikheli lewebhu. Ngicabanga nokuthi kubi… yebo, ngikushilo!
Kubukeka sengathi ukutholwa kwekhodi ye-QR is Kuyinselele impela. Ama-58% alabo abahloliwe bebengazi amakhodi we-QR. Ama-25% alabo okwaxoxwa nabo babengazi nokuthi bayini! Ekuvikeleni amakhodi we-QR, akuzona zonke izindaba ezimbi. Abantu bazosebenzisa amakhodi we-QR lapho belindele isaphulelo futhi ezinye izimboni ziwasebenzisela ukuthola idatha ngempumelelo.
Izibonelo ezimbalwa engizibonile ebengicabanga ukuthi ukusetshenziswa okuhle kwamaKhodi we-QR:
Endaweni yokudlela e-Atlanta, imenyu isebenzisa amakhodi e-QR ukuze umfundi abheke imininingwane eyengeziwe yokudla okunempilo kwimenyu eku-inthanethi.
Engqungqutheleni yeWebtrends, kumiswa amakhamera esimisweni ngasinye senkomfa ukuze kuthathwe imininingwane yebheji yezivakashi. Lokhu kuvumele iqembu ukuthi likhombe ukuthi iziphi izikhathi ezithandwa kakhulu.
Ukuthumela amakhuphoni nge-imeyili kubamukeli. Noma kunjalo, ama-barcode asebenza kahle njengamakhodi we-QR. Futhi izikena zebhakhodi zivame kakhulu ezindaweni zokuthengisa.
Yikuphi ukusetshenziswa okuwusizo okubonile ngokusebenzisa amakhodi we-QR?
Ngicabanga nokuthi sisengcupheni yokusebenzisa ubuchwepheshe bokuskena nokubona buhambe phambili kakhulu kunamakhodi we-QR.
Ugaxekile Nemboni Yemiyalezo Yombhalo
Aug 8, 2011 ngo-6: 28 PM
Ngabloga ngamakhodi we-QR emuva ngoDisemba ka-2010 ( http://kremer.com/qr-codes-link-brick-and-mortar-to-online nazi ezinye zeziphakamiso zami….
Esitolo esitolo u-Facebook Uyathanda: “Jabulela ukuthenga lapha? 'Sithande' ku-Facebook. Skena le khodi ye-QR nefoni yakho ephathekayo. Iba ngowokuqala ukuthola ukunikezwa okuhle nezaphulelo ngekhasi lethu le-Facebook. ”
Esitolo Bhalisela i-E-mail Newsletters noma izexwayiso zombhalo weSMS. Umbono ofanayo njengoba ngenhla. Qiniseka ukuthi unikela ngomvuzo wokubhalisa. Qiniseka ukuthi ikhasi lokufika lencwadi yekhodi le-QR liyasebenziseka.
Kumininingwane yesitolo yabantu noma yenhlolovo: "Sitshele okuncane ngawe bese uthola amakhuphoni amahhala". Iba nekhasi elifushane lokuhlola ubungani beselula nekhasi lokugcina libe isigqebhezana esitolo abangasisebenzisa njengamanje.
Izikhangiso eziphrintiwe, izincwajana, amakhadi ebhizinisi: “Thola eminye imininingwane ngalokhu. Skena le khodi ye-QR kuselula yakho. ” Amakhodi we-QR amasha, kepha imidiya eminingi ephrintiwe inesikhathi sokuhola sezinyanga. Khuluma neklayenti lakho mayelana nokuthi amapulani wabo wokuphrinta ayini manje nezinyanga eziyisithupha kusukela manje.
Ukucabanga ngale komhlaba wokuthengisa. Ngisanda kukhuluma nabantu bezokumaketha nombukiso emnyuziyamu omkhulu. Ngiphakamise ukuthi bangafaka ikhodi ye-QR ezindaweni ezithile zombukiso. Ikhodi ingaxhumanisa nekhasi labo leWebhu entweni ebonisiwe, noma ixhume nomthombo ofanele ongaphandle kweWebhu.